Horseed oo kulan u qabatay Dhalinyarada
22 Jan 22, 2013 - 9:38:59 AM
Urur siyaasadeedka talada Puntland haya ee Horseed ayaa galabta 22 January 2013 hotelka Panorama magaalada Bossaso waxa xubno ka tirsani la kulmeen Dhalinyarada gobolka Bari.
Wasiirka Gaadiidka iyo hawlaha guud Eng.Daahir Xaaji Khaliif ,wasiir ku xigeenka Deegaanka Burhaan Xirsi Cilmo ,wasiir ku xigeenka Amniga Cabdirisaaq Xareed Ismaaciil ,Gudoomiyaha Gobolka Bari Cabdismad Maxamed Gallan,Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon iyo sarakiil kale oo ka tirsan ururka ayaa kula kulmey boqolaal ardeyda Jaamacdaha ka dhigta Bossaso.
Daahir Xaaji Khaliif waxa uu dhalinyarada uga waramay qaab dhismeedka Urur siyaasadeedka Horseed ,Asaasayaashiisa iyo himilooyinka marka u xisbi u xuunsiibto.
‘’Dhalintu waa hogaanka dalka berito waxaanuna u baahanahay inaad ka qayb qaadataan Geedi socodka Dimoqraadiyada Puntland oo xibiga Horseed ka yahay hormuud’’ ayuu yiri wasiirku.
Dhankiisa ayaa wasiir xigeenka Amniga Puntland waxa uu dhalinyarada ku booriyey inay ka shaqeyaan amaanka iyo xoojinta nabadgelyada islamarkaasina cidii ay ka shakiyaan ama amaan darro ku dhaqaaqda la soo socod siiyaan laamaha amaanka.
Dhalinyarada ka qayb gashay kulankan ayaa dhankooda soo jeediyey hadalo ku saabsan guud ahaan geedi socodka Puntland uga baxdey habkii Qabiilka wax ku qaybsan jirtey iyagoona amaan gaar ah ku siiyey Dr,Cabdiraxman Maxamed Farole xukuumada u horkacayo.
Taageero ayay dhalinyaradu u muujisey ururka Horseed oo u horseedey Puntland sida ay shegeen inay ka gudubto marxaladii Jahliga loogana baxay Dimoqraadiyada iyo Codka cidaad kalsooni ku qabtey inaad siisid.
Intii ay socotey waxa su’aalo ku saabsan ururka iyo qorshayaashiisa dhalinyaradu weydiisey masuuliyiinti ka socotey Uurrka Horseed,waxana uga jawaabay wasiirkada Gaadiidka iyo Degaanka.
Ugu danbeyntii waxa soo xirey xaflada Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Gallan oo tilmaamay in cida wadada loo xaaraya ay tahay dhlinyarada loona baahanyahay inay ka qayb qaataan Ururka Horseed oo fursado badan u balanqaadaya.
‘’Waagii hore qofka xildoonka ah waa uu is cayilin jirey si qof weyn loogu maleeyo balse hada waxay tagaysaa in inta la isdhuubo oo timahana la soo jarto la iska dhigo dhalinyaro madaama ay dalka hogaaminayaan beri iyagu’’ ayuu yiri Gudoomiye Gallan.
Dhowaan waxa lagu wadaa in kulamo sidan oo kale ah lagu qabto magaalooyinka Puntland ,waxana Horseed masuliyiintu shegeen in dhalinyaradu fure u tahay hawsha ururkan.